कला/मनोरञ्जन | Jwala Sandesh
अस्ताए ‘बेनीको बजार’ का सर्जक श्रेष्ठ
बेनी : ‘बेनीको बजार, जता माया उतै छ नजर…’ बोलको गीतका सर्जक गायक टीकाबहादुर श्रेष्ठको निधन भएको छ। लोकगीतमार्फत म्याग्दीको सदरमुकाम बेनी बजारको पहिचान स्थापित गर्न योगदान गरेका श्रेष्ठको बिहीबार बुटवलमा ७५ वर्षको उमेरमा निधन भएको हो। टिकाबहादुरका आफन्तसमेत रहेका नेकपा एमाले म्याग्दीका अध्यक्ष हरिकृष्ण श्रेष्ठले उनको मृत्यु भएको जानकारी दिए। श्रेष्ठ मृगौला सम्बन्धी रोगबाट थलिएका थिए। पारिवारिक स्रोतकाअनुसार श्रेष्ठले मृगौलाको डायलाइसीस [...]
विधिवत् रूपमा होलीको सुरुवात
काठमाडौं : आइतबारदेखि देशभर रंगहरूको पर्व होलीको विधिवत सुरुवात भएको छ । वसन्तपुरस्थित गद्दी बैठकको दक्षिणतर्फ बिहान ८ : २६ मा तीन छत्रे होलीको चीर ठड्याइएपछि देशभर होलीको विधिवत सुरुवात हुने मान्यता छ । चन्द्रमास अन्तर्गत् फाल्गुन महिनाको पूर्णिमाको दिन मनाइने होली पहाडमा चैत १५ गते र तराई भेगमा चैत १६ गते मनाइँदैछ । होलिकाको दहन र र कृष्ण लीलासँग सम्बन्धित यो पर्व आइतबारबाट विधिवत सुरु भएको वसन्तपुरस्‍थित तलेजु मन्दिरका पुजारी उद्धव [...]
काठमाडौँ : वि.सं. २०७८ सालमा तीनवटा दसैं परेको छ । यो वर्ष चैत्र शुक्ल पक्षमा पर्ने दुई वटा चैते दसैं परेको छ । वैशाख ७ गते मंगलबार चैत्र शुक्ल अष्टमी अर्थात् चैते दसैं परेको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले स्वीकृत गरेको पात्रो (पञ्चाङ्ग) मा उल्लेख छ ।यसैगरी वि.सं. २०७८ को चैत २६ गते शनिबार पनि अर्को चैत्र शुक्ल अष्टमी अर्थात् चैते दसैं परेको छ । बडा दसैंका रूपमा मनाइने आश्विन शुक्ल पक्षको दसैं आगामी वर्ष असोज २१ गते बिहीबार घटस्थापना गरेर सुरु हुने [...]
दुल्लुमा लोक दोहोरी प्रतियोगिता
दैलेख : नेपाल विद्यार्थी संघ विजया मावी ईकाई समिति दुल्लूको आयोजना र नेपाली काँग्रेस क्षेत्रीय कार्य समिति निर्वाचन क्षेत्र नं. २ दैलेखको पुरस्कार व्यवस्थापनमा श्रीपञ्चमीको अबसरमा माध्यामिक विद्यालय स्तरिय लोक दोहोरी प्रतियोगिता सम्पन्न भएको छ । एक समारोहका बिच १४ वटा टिमको सहभागीतामा दुल्लू नगर भित्रका माध्यामिक विद्यालयहरुको सहभागितामा लोक दोहोरी प्रतियोगीता सम्पन्न भएको हो । प्रतियोगितामा बिजया माबी छात्रा समूह प्रथम, सुर्योदय माबीको [...]
माघ ३० गते सोनाम ल्होसारमा सार्वजनिक बिदा
तस्विर फाइल काठमाडौं : सरकारले माघ ३० गते सोनाम ल्होसार पर्वको अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को यही माघ २६ गतेको निर्णयअनुसार उक्त दिन सार्वजनिक बिदा दिइएको गृहमन्त्रालयले जनाएको छ । यही शुक्रबार सोनाम ल्होसारको अवसरमा नेपालभरका सबै सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक सङ्घसंस्था र विदेशीस्थित नियोगमा बिदा दिने निर्णय भएको मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ [...]
करिश्मा महानायिकाको पदवी
काठमाडौं : आरके इन्टरटेनमेन्टले आफ्नो बीसौं वार्षिकोत्सवको अवसरमा नायिका करिश्मा मानन्धरलाई महानायिकाको पदवी दिएको छ। स्मरण रहोस्, एक दशकअघि आरके इन्टरटेनमेन्ट समूहले नायक राजेश हमाललाई महानायक घोषणा गरेको थियो। राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजित कार्यक्रममा करिश्मालाई राजेश हमाललगायतले महानायिका देखिने स्यासे र क्राउन लगाइदिएका थिए। नेपाली रजतपटमा तीन दशकदेखि छाएकी करिश्माले २०४५ सालमा चलचित्र ‘सन्तान’बाट नायिकाको रूपमा डेब्यु गरेकी थिइन्। [...]
काठमाडौं : प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई बेहुला बनेका छन् । ४९ वर्षको उमेरमा मुख्यमन्त्री राईले २३ वर्षीया मोडल जाङमु शेर्पासँग आइतबार विवाह गरेका हुन् । राजधानी काठमाडौंको एलिस पार्टी प्यालेसमा थोरै संख्यामा जन्ती लिएर मुख्यमन्त्री राई बेहुली लिन पुगेका हुन् । मुख्यमन्त्री राई भोजपुरका हुन् भने बेहुली बनेकी शेर्पाको पुर्ख्यौली संखुवासभा हो । विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमणको समय भएको भन्दै [...]
मुम्बई : अजय देवगन र फिल्म निर्देशक इन्द्र कुमारले बलिउडमा धेरै वर्षदेखि सहकार्य गर्दै आएका छन्।‘इस्क’को सफलतादेखि अहिलेसम्म उनीहरूले कैयौं फिल्ममा एकसाथ काम गरे। एक पटक फेरि उनीहरू सँगै काम गर्न थालेका छन्। उनीहरूले निर्माण गर्न लागेको फिल्मको नाम ‘थ्यांक गड’ राखिएको छ। यो फिल्ममा अजयको साथमा रकुल प्रीत सिंह र सिद्धार्थ मल्होत्रा पनि हुनेछन्। यो कमेडी फिल्ममा एउटा विशेष सन्देश हुनेछ। फिल्मको सुटिङ २१ जनवरी २०२१ बाट सुरु हुँदै [...]
काठमाडौं : अभिनेत्री बर्षा सिवाकोटी स्किन नेपाल मेडिसिटी हस्पिटल अन्र्तगत रहेको स्किन सिटीको सिइओ नियुक्त भएकी छन् । सिइओमा नियुक्त भएसँगै बर्षाले अभिनयसँगै आफ्ना पाइला व्यापारिक क्षेत्रमा पनि अगाडि बढेको बताइन् । छाला, कपाल तथा नङसँग सम्बन्धित काम हुने स्किन सिटीमा आबद्ध भएसँगै शुभेच्छुकको साथ, सहयोग र सुझाबको अपेक्षा समेत उनले राखेकी छन् ।‘स्किन सिटीलाई नयाँ उचाइमा लैजाने मेरो पहिलो प्रतिबद्धता हुनेछ’ उनले भनिन् ‘मैले पाएको यो [...]
२०२१ मा दीपिकाका पाँच फिल्म
मुम्बई : बलिउड अभिनेत्री दीपिका पादुकोणले अहिलेसम्म आफ्नो उत्कृष्ट अभिनयमार्फत दर्शकलाई मनोरञ्जन गराउँदै आएकी छन्। तर २०२० दीपिकाका लागि खराब सावित भयो। ड्रग्सको मुद्दामा फसेपछि उनका धेरै फ्यान रिसाए। अहिले दीपिका आफ्ना फ्यानको मन जित्न डटेर लागिपरेकी छन्। सन् २०२१ मा दीपिकाका पाँच फिल्म रिलिज हुँदै छन्। उनी आगामी फिल्मका लागि निकै उत्साहित छिन्। शकुन बत्राकको फिल्ममा दीपिका सद्धान्त चतुर्वेदी र अनन्या पाण्डेसँग देखिनेछिन्। सुटिङका क्रममा [...]